Vol. 12 OKTOBRA, 1910. Tsia
Copyright, 1910, avy amin'ny HW PERCIVAL.
EFITR'ANDRIAMANITRA, nandritra ny, ary aorian'ny fampisehoana ara-batana rehetra dia misy ny atmosfera. Avy amin'ny fasika iray amin'ny tany, avy amin'ny fasika iray mankany amin'ny hazo goavambe iray, avy amin'ny animalculae ho an'ny olombelona, ​​ny vatana ara-nofo rehetra dia miorina ao anatin'ny atiny manokana, mitazona ny rafitra ao anatiny ary latsaka ao anatin'ny tontolo iainany.
Ny teny dia avy amin'ny teny grika, atmos, midika hoe vapor, ary sphaira, sphere. Io no teny ampiasaina hanondroana ny rivotra manodidina ny tany ary faharoa ny singa manodidina na ny fitarihana, sosialy na fitondran-tena, izay tontolo hafa dia fe-potoana iray hafa. Ireo teny ireo dia tafiditra ao amin'ny teny ampiasaina eto, fa ankoatra izany dia misy dikany lalindalina kokoa sy misy hatrany ny fampiharana. Ankoatra ny fandefasana ara-batana voafetra dia tokony ho fantatra fa manana hery sy fampiasana ara-batana bebe kokoa ny atmosfera, ary tokony ho fantatra fa misy ati-pihetsika ara-tsaina, toe-tsaina ary toe-panahy ara-panahy.
Ny mikonosin'ny zava-manan'aina rehetra dia mihantona amin'ny atmosfera alohan'ny hidirany ao anaty rano na eto an-tany. Ny fiainana ilaina amin'ny zavatra ara-batana rehetra dia avy any ary mivezivezy amin'ny rivotra. Manome endrika ny endriky ny tany sy ny tany ny rivotra iainana. Manome aina ny ranomasina, ny farihy, ny renirano ary ny fitrandrahana. Avy amin'ny atmosfera no misy ny fiainana izay manohana ny ala, ny zavamaniry ary ny biby, ary ny lehilahy dia miala amin'ny fiainany avy amin'ny atmosfera. Ny atmosfera dia manome sy mampita hazavana sy feo, hafanana ary mangatsiaka, ary ny menaka manitra eto an-tany. Ao anatin'izany dia mitsoka ny rivotra, mianjera ny orana, miforona ny rahona, mamirapiratra ny tselatra, mihorohoro ny tafio-drivotra, ny loko miseho, ary ao anatin'izany dia misy ny trangan-javatra rehetra momba ny natiora. Ao anatin'ny tontolo iainana dia misy fiainana sy fahafatesana.
Ny zavatra rehetra dia manana ny maha izy azy ao anatin'ny atmosfera. Ao anatin'ny atmosfera no misy ny toetra mampiavaka ny zavatra tsirairay. Mialà na sakafao ny zavatra avy amin'ny atmosfera ary avelao ny ainy, hanjavona ny endriny, hiparitaka ny singa ary hijanona ny fisiany. Raha mety ho fongotra tsy ho eto an-tany ny rivotra iainana eto an-tany, dia ho faty ny hazo sy ny zavamaniry ary tsy afaka mamokatra sakafo, rano tsy mety afaka misotro, biby sy lehilahy dia tsy afaka miaina ary ho faty.
Noho ny fisian'ny atmosfera eto an-tany, izay miaina sy miaina eto an-tany dia mitana ny endriny ary manana ny maha izy azy, toy izany koa ny rivotra iainan'ny zaza teraka, ary mitombo sy mihazona ny maha-izy azy . Ny atmosfera no zavatra voalohany raisin'ny olona, ​​ary ny zava-dehibe indrindra dia ny asany ara-batana. Ny rivotra iainan'ny olombelona dia tsy vahaolana tsy voafaritra sy tsy azo antoka, manana drafitra mazava sy toetra tsara. Mety ho azo tsapain-tanana amin'ny saina izany ary fantatra amin'ny saina. Ny rivotra iainan'ny olombelona dia tsy voatery ho toy ny habetsaky ny orana na ny doro. Ny atmôsferin'ny olombelona izay manamboatra ny olombelona, ​​manana ny fetrany manokana ary mifamatotra amin'ny fifandimbiasana voafaritra tsara, amin'ny endriny manokana ary araka ny lalàna.
Ny lehilahy ara-batana ao amin'ny atmosfera dia tahaka ny zaza amam-behivavy ao amin'ny amnionany sy ny koriany amin'ny fivoaran'ny fandrosoana ao anatin'ny atiny lehibe, ny kibo. Manodidina ny telo ampahefatry ny sakafom-pamokarana amin'ny vatany no entina amin'ny fofony. Ny fofonany dia tsy hoe gazy be dia be izay miditra ao amin'ny havokavony. Ny fofonaina dia sehatra voafaritra amin'ny alalan'ilay vatana ara-batana no atolotra amin'ny atmosfera ara-batana sy ara-pihetseham-po, toy ny foetus dia mivoaka amin'ny rà mandriaka amin'ny kibo sy placenta amin'ny tadim-poitra.
Ny rivo-piainana ara-batana ao amin'ny olombelona dia ahitana vatana ara-batana tsy manam-petra sy tsy hita maso izay entina mivoaka sy miala amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny fofona sy ny hoditra. Ny singa ara-batana natao tamin'ny alalan'ny fofona dia mifandray amin'ny vatan'ny olona ary mitazona ny rafitra. Ireo vatana ara-batana ireo dia mijanona amin'ny famoahana amin'ny fofon'aina. Manodidina ny olombelona ara-batana izy ireo ary mamorona ny rivotra iainany. Ny rivo-piainana ara-batana dia mety amin'ny fofona sy ny emboka manitra ary mamokatra fofona, izay avy amin'ny natiora sy ny kalitaon'ny vatana.
Raha mahita ny rivotra iainan'ny lehilahy iray izy dia hiseho toy ny singa tsy hita isa ao anaty efitrano iray hita taratra amin'ny tara-maso amin'ny tara-pahazavana. Ireo dia hita ho manodidina na mikorontana momba ny vatana, izay rehetra voatazona amin'ny fihetsik'izy ireo amin'ny fofony. Hita fa mihazakazaka izy ireo, mivezivezy ary miverina ao amin'ny vatany, manaraka azy na aiza na aiza alehany ary manimba ny singa hafa amin'ny atmosfera hafa izay mifandray aminy, araka ny tanjaka sy ny fahatsapana ny rivotra iainana mifandraika aminy . Amin'ny alàlan'ny fifandraisana na ny famerenana ny atmosfera ara-batana dia miparitaka ny aretina ary mifindra amin'ny fiterahana. Ny vatana ara-batana iray anefa dia mety ho voan'ny otrikaretina ara-batana, amin'ny fikojakojana ny ao anatiny sy ivelany, amin'ny fandavana ny tahotra, ary amin'ny fahatokisana ny fahasalamana sy ny herin'ny fanoherana.
Ny rivotra iainan'ny olombelona dia mamela sy manodidina ny rivotra iainany. Ny rivomahery dia matanjaka sy mahery kokoa amin'ny heriny sy ny fiantraikany noho ny ara-batana. Mbola tsy noforonina ilay olona saro-pady, fa aseho amin'ny endrika endrika astral ny vatana. Miaraka amin'ny vatan'ny astral ho toy ny foibe, ny manodidina ny psychic dia manodidina azy ary ny ara-batana lava dia mifanaraka amin'ny heriny. Mety ho hita ho toy ny vovon-drano na rano mangarahara izy io. Ny atmosfera ara-batana dia hiseho ao anatin'izany ho toy ny singa na fitotoana anaty rano. Ny rivotra marefo amin'ny lehilahy iray dia azo oharina amin'ny ranomasimbe iray, miaraka amin'ny tondra-drano mafana sy mangatsiaka, ny onjam-pahagagana sy ny fihoaram-pefy, ny toho-tantely sy ny mpiompy, ny fiakarany ary ny fiakarany ary ny fiakarany sy ny fidoboky ny rambony. Ny atmosfera mahatsiravina ataon'ny olona dia manohitra ny vatana amin'ny endriny mifendrofendra, toy ny ranomasina misamboaravoara. Ny atmosfera miaro ny vatana sy ny vatan'ny fihetseham-po, ny vatana astral. Ny fihetseham-po, ny faniriana ary ny firehetana dia mitranga amin'ny rivotry ny rivotra toy ny fisondrotry ny ririnina, na tahaka ny fanararaotana sy ny fandripahana ny rano amin'ny ala maitso, na tahaka ny tohatra na tadio izay miezaka mamolavola ny zavatra rehetra ao anatiny , ho azy. Tahaka ny ranomasimbe, ny rivotra iainana dia tsy mitsahatra sy tsy afa-po. Ny atmosfera dia mijery ny tenany ary misy fiantraikany amin'ny hafa. Rehefa tafiditra ao anaty na amin'ny alalan'ny tondra-drano ny vatan'ny astral, dia misy karazana fihetseham-po na fihetseham-po isan-karazany vokatr'izany. Izany dia manosika ny hivoatra any ivelany ary miova toy ny onjam-pivoarana izay mitarika amin'ny zavatra iray, na miteraka faniriana ho an'ny zavatra sasantsasany ary mamoaka fihetseham-po tahaka ny amin'ny fiatoana matanjaka.
Manodidina ny vatana sy ny manodidina ny vatana ny rivotra, ny atmosfera dia manana ny endri-piainana manjavozavo toy ny mason'ny tena manokana. Miankina amin'ny toetrany izy io ary mety hanana hery manintona ho an'ny hafa. Ny rivotry ny toetran'ny olona dia misy fiantraikany amin'ny olona izay ifantohany, mifanaraka amin'ny tanjany na ny herin'ny maodeliny manokana ary mifanaraka amin'ny ahiahin'ny lehilahy hafa, amin'ny alàlan'ny rivotra iainany. Ity atmosfera ara-pihetseham-po iray an'ny olona iray ity dia mamporisika sy mampitony ny ati-pihetseham-pon'ny olona iray hafa na amin'ny asa maro sy avy any amin'ny vatana na vatana; ary ny taova ao amin'ny vatana dia sorena arakaraky ny toetry ny faniriana na ny fihetseham-po na ny fitiavan-tena izay manan-danja. Izany dia azo atao amin'ny fisian'ny iray fotsiny, tsy misy fampiasana teny na fihetsika na inona na inona. Mba hahatonga ny sasany hieritreritra ny hanao na hilaza zavatra na haneho ny fihetseham-po sasantsasany, izay tsy ho azon'izy ireo raha tsy misy fiantraikany amin'ny rivotry ny saina na ny mason'ny tena manokana izay manosika na manintona azy ireo. Ny olona mahita fa ny fiheverany mamely ny hafa dia mifanohitra amin'ny zavatra fantany fa tsara indrindra, na raha tsapany fa tsy dia misy fiantraikany loatra izy, dia afaka manamarina ny fihetsika na manova ny fitarihana rehefa tsy manitsy ny fihetseham-po na ny faniriana tsapany, ary amin'ny fanovana ny eritreriny amin'ny lohahevitra iray hafa momba ny natiora ary amin'ny fihazonana ny heviny tsy tapaka amin'io lohahevitra io. Ny fahatsapana sy ny fahatsapana ny karazana rehetra dia mamokatra amin'ny alalan'ny ati-piainana manokana sy ny rivotry ny toetran'ny hafa. Ny rivotra iainan'ny olona sasany dia manana fiantraikany amin'ny fanentanana, mampientanentana ary mahaliana ireo izay ifantohan'izy ireo. Mety ho mahafinaritra izany. Ny hafa dia manana fiantraikany mifanohitra amin'ny famerenana na famonoana ireo olona izay mihaona aminy, na mahatonga azy ireo tsy hanana fahalianana amin'ny raharaha.
Ny ati-pihetsika ara-psikolojika dia ny fitaovana ampiasain'ny saina amin'ny vatan'ny vatana amin'ny alàlan'ny vatan'ny volo, ary io no fitaovana ahafahan'ny rehetra mahita ny fahatsapana sy ny fahatsapana mifandray amin'ny saina. Raha tsy misy ny rivotry ny saina, ny sain'ny olombelona amin'ny toe-piainany eo amin'ny toe-piainana ankehitriny dia tsy hahatsapa na hifandray na hanao zavatra eo amin'ny vatany na ny tontolo hita maso.
Amin'izao vanim-potoan'ny fampandrosoana ny maha-olombelona izao dia tsy manana vatana ara-tsaina voafaritra tsara sy voafaritra tsara mandritra ny fiainany ara-batana. Saingy misy atmosfera voafaritra tsara izay manodidina sy mihetsika ary amin'ny toetrany ara-pihetseham-po, ary avy eo eo amin'ny vatana ara-batana amin'ny alàlan'ny rivotra sy amin'ny toeram-pitsaboana nerveuse. Ny rivotra ara-tsaina dia toy ny sehatry ny herinaratra na angovo herinaratra, arakaraky ny hatsaran'ny maotin'ny rivotra. Mifandraika amin'ny atmosfera izy io satria ny herinaratra dia any amin'ny saha maitso. Manintona ny toe-tsaina ara-tsaina sy ny fihetsiky ny toe-tsaina ara-tsaina ary amin'ny alalan'ny toe-piainana ara-tsaina ny toe-tsaina ara-tsaina sy ara-batana ary ny fisehoan-javatra na ny fisehoan-javatra.
Ny toe-tsaina manosika ao amin'ny atiny dia tsy mahatsapa, ary tsy manaiky ny fahatsapana na inona na inona. Amin'ny fotoana maha-miasa azy sy amin'ny fifandraisany amin'ny rivotra sy ny vatana dia mora ary mahatsapa fahatsapana. Ny saina amin'ny atiny ara-tsaina dia mazoto amin'ny eritreritra. Ny toe-tsaina mihetsika ao anatin'ny atiny ara-tsaina ary rehefa mirotsaka amin'ny fisainana tafahoatra dia tsy fahatsapana.
Raha vao tafapetraka ao anatin'ny toe-piainana ara-pihetseham-po sy ny fifandraisana amin'ny fahatsapana ny eritreritra dia mahatsapa ny fahatsapana ny saina.
Ny tontolo ara-tsaina dia ilaina amin'ny fiainan'ny olombelona satria ny rivotra dia ilaina amin'ny tany sy ny rano ary ny fiainan'ny zavamaniry sy ny biby. Raha tsy misy ny ati-pandrenesana dia mety mbola mbola velona ihany ny olombelona, ​​saingy biby izy io, hay, na adala. Satria noho ny toe-tsaina ara-tsaina izay hita fa ny olombelona dia hita fa tsy mihoatra ny biby. Ny ati-pihetseham-pahaizana fotsiny dia tsy manana feon'ny fieritreretana na fitarainana ara-moraly. Manjaka sy manjakazaka amin'ny faniriana izy, ary tsy manelingelina amin'ny hevitra ara-moraly na ny tsara sy ny ratsy. Rehefa mifandray sy miara-miasa amin'ny ati-pihetsika ara-tsaina ny toe-tsaina ara-tsaina, dia raisina ny hevitra ara-môraly; ny hevitra momba ny tsara sy ny ratsy dia heverina fa, raha mifanohitra amin'ny hevitry ny sain-kevitra ny fihetsika, dia miondrika ny feon'ny fieritreretana, Tsia. Raha mamaly an'ity No No ny eritreritra ao an-tsaina ara-tsaina io, ny atmosfera ara-tsaina dia manosika, ny rivo-piainana ara-pihetseham-po ara-pihetseham-po, ary ny fijerena ny fitondran-tena maloto tsy azo atao Saingy rehefa maniry mafy kokoa ny faniriana noho ny eritreretina fa marina, ny rivotry ny psychic dia mihodina amin'ny fotoana ny toe-piainana ara-tsaina sy ny faniriana dia tafiditra amin'ny asa raha toa ka mamela ny toe-javatra.
Ny rivotra iainan'ny lehilahy dia misy fiantraikany amin'ny hafa amin'ny fomba tsy mitovy amin'ny toetrany ara-tsaina. Ny fihetseham-piainan'izy ireo dia misy fiantraikany amin'ny fihetseham-po hafa, ary ny faniriana dia ny vokatra mavitrika ary ny fahatsapana dia vokatry ny vokatra; Ny fiheverana ara-tsaina kosa dia misy fiantraikany amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny sainy. Ny hevitra dia ny antony mahatonga ny fizotry ny saina. Ny fihetsik'ireo toetran'ny psychic dia mampihetsi-po ary miteraka fahatsapana. Ireo atin'ny toe-tsaina dia manam-pahaizana, ary vokatr'izany. Ny fihetsiky ny saina amin'ny toe-tsaina misaina dia moraly, ary rehefa manjavona ny saina ny saina dia ny moraly.
Miankina amin'ny vatany sy ny atmosfera ary ny rivotra iainan'ny lehilahy na ny hafa, ny rivotra iainany no mampiakatra azy, mandrisika sy mandrisika ny hafa hieritreritra sy manome soso-kevitra momba azy ireo, na koa misy vokany amin'ny fametrahana fanakorontanana, fampijaliana , mametaveta sy mamafa ny asany ara-tsaina. Tsy vita amin'ny fikasana foana izany. Ny iray mahakasika ny hafa dia mety tsy mahatsapa ny vokatra; Ireo vokatra ireo dia novokarina na tsy niniana ny heviny araka ny herin'ny eritreriny sy ny fahatsapana ny atin'ny toe-tsain'ny hafa amin'izy ireo. Ireo olona mitovy hevitra, na na dia mitovy sy aty amina toe-tsaina tsara dia mety hanohitra sy hifanohitra raha samy hafa ny idealy. Ny fanoherana toy izany dia mety hifoha sy hampiroborobo na hampivelatra ny hery hieritreretana, ary mety hanamafy ny toe-tsaina ara-tsaina amin'ny iray na ny roa, raha toa ka tsy miteraka ny vokatra mifanohitra amin'ny herin'ny hery sy ny fandresena.
Ny ati-tsaina dia ny mpanelanelana ny biby ara-batana amin'ny toetrany mamy, ary ny maha-izy azy na ny olona ara-panahy. Amin'ny alalan'ny ati-tsaina sy ny eritreritra miasa amin'ny alalany, ny faniriana mahery vaika amin'ny rivodoza manjavozavo dia azo fehezina sy mifehy ary ny lehilahy ara-batana dia nanao fitaovana tonga lafatra izay nanamafisana ny faniriana, ny saina voaofana sy nahatsiaro tena ny tenany sy ny asany eo amin'izao tontolo izao ary ny tsy fahafatesana tsy tapaka.
Tsy toy ny lehilahy matanjaka ara-batana sy ara-batana amin'ny ati-piainan'izy ireo ara-tsaina sy ara-batana, ny olona ara-panahy ao anatin'ny tontolo ara-panahy dia manana faharetana. Noho ny fahatanterahana sy ny faharetan'ny rivotra ara-panahy amin'ny olombelona ara-panahy no nahatonga ny toe-tsaina ara-tsaina, ny rivotra nasongadina ary ny fisian'ny antsoina hoe zavamananaina, ao anatiny sy avy amin'ny iray hafa, ary ny ara-batana sy ara-tsaina ary ara-tsaina Ny atmosfera dia miorina rehefa avy samy manana ny toetrany ara-panahy.
Ny fisainana dia mety hihevitra azy io ho foto-kevitra eritreritra, ny rivotra ara-panahy amin'ny olombelona dia azo ampitahaina amin'ny lafiny tsy misy loko amin'ny hazavana tsy misy pentina sy ny olona ara-panahy amin'ny zavatra izay mahatsapa sy amin'ny fahazavana. Amin'ny alalan'ny fifandraisana sy ny ampahany, dia mety handinika ny ati-tsain'ny olona ao anatin'ny faritra ambany kokoa amin'ny ara-panahy, ny saina ao anatin'ny toe-tsaina, ny ara-batana ao anatin'ny atmosfera ara-tsaina, ary ny lehilahy ara-batana ho toy ny fandoahana ny rehetra.
Na ny atiny ara-panahy na ny toe-tsaina tsy hita maso dia mety ho hitan'ny mpikaroka. Mety ny atmosfera ara-panahy, saingy matetika izy no tsy voakitiky ny sain'ny saina, ary tsy tsapan'ny olona iray, satria ny sain'ny olona no tena liana amin'ny zavatra eritreretina. Na dia heverina ho ara-panahy aza ny hevitra ara-panahy, dia ny hevitra ara-tsaina ihany no lazaina, fa ny olona ara-panahy sy ny atmosfera ara-panahy kosa dia tsy avy amin'ny saina na ny asan'ny saina. Ny rivotra ara-panahy dia tsy mahatsapa olona matetika satria ny rivotry ny psykè dia tena mandoza sy tsy miteniteny fa tsy azon'ny olona ny hery ara-panahy na ny fandikana ny fisiany. Mety hahatsapa ny toe-piainany ara-panahy amin'ny alalan'ny fahatsapana na ny fahatsapana fa Izy, ilay "Izaho" dia hanohy ho toy ny fahatsapana fa na dia eo aza ny fahafatesana. Ny faharetan'ny faharetan'ny "izaho" dia hahatsapa fa tena misy marina noho ny fahafatesana. Noho ny toe-piainana ara-pihetseham-po, ny fahadisoam-panantenana dia miseho amin'ny fomba diso sy mihevitra ny fahatsapana ny fitohizan'ny "izaho", ary manome lanjany ny toetra maha-olona (izany hoe ny hevitr'ilay izaho fa tsy ny mpanabe ahy), izay manana faniriana mafy mbola hitohy. Rehefa misaina ny rivotra ara-panahy ny saina, ny atmosolojia ara-panahy dia raisina ho fiadanana sy hery mangina ary ny tsy fahampiana. Ny atmosfera ara-panahy dia manome ny saina ho an'ny finoana, mionona kokoa sy maharitra kokoa noho ny fahatsapana izay azo avy amin'ny porofon'ny fisainana na amin'ny lojika. Noho ny fisian'ny rivo-piainana ara-panahy dia manana finoana sy fahatokiana amin'ny tsy fahafatesana ny saina.
Ny ampahany tsy tafiditra ao an-tsaina dia tsy mandinika ny olona ara-panahy raha vao fantatra ny atmosfera ara-panahy, satria ny atmosfera ara-panahy dia tsy mifanakaiky loatra amin'ny fahasamihafan'ny rivotra ary mahatonga azy ho tebiteby, tony, hery ary fanatrehana , hafahafa loatra mba hijerena ny sain'ny olona tsy misy tahotra na alahelo. Amin'izay fotoana izay, rehefa mitombo ny atmosfera ara-panahy amin'ny fisiany dia matahotra loatra ny mbola mijanona ary mahafantatra izany.
Betsaka ny olona no nieritreritra ny momba ny atmosfera izay ampiharina amin'ny lehilahy tsirairay. Angamba tsy nihevitra ny fahasamihafana sy ny fifandraisana misy eo amin'ny olona ara-batana sy ara-tsaina, ara-tsaina, ara-panahy ary ny atiny. Na izany aza, raha miady saina momba ny olan'ny atmosfera ny saina ary manadihady tsara, dia hisokatra ny saha vaovao ary hisy hazavana vaovao hariana amin'ny fomba izay entin'ny olona iray amin'ny hafa. Ho hitan'ilay mpianatra hoe maninona izy sy ny hafa dia samy manana ny endrika mifanohitra amin'izany sy ny maro hafa, ary ny fomba isehoan'ny karazan'olona tsirairay ny fanaraha-maso mandritra ny fotoana voafetra ny fihetsiny ary avy eo manome toerana ho an'ny manaraka. Raha tsy misy fahatakarana mazava amin'ny atmôsferin'ny olombelona dia tsy ho takatry ny olona iray ny toetra anaty sy ny lalàna fototra mifehy ny tranga ara-batana, ary tsy ho hitany sy hentitra ary miditra ao anatin'izao tontolo izao izay ahafahany is surrounded. Tsy dia fantatra loatra ny momba ny atmosfera, saingy tsy misy olona mahafantatra ny vokatra ateraky ny atmosfera amin'ny olona sy amin'ny hafa.
Raha misy olona iray mipetraka irery ary misy ny anaran'ny iray hafa, dia hisy vokany ny anarana. Rehefa miditra ny iray, dia misy vokany hafa ny vokatra satria ny rivotra iainan'ny mpitsidika dia misy fiantraikany amin'ny rivotra iainan'ny olona mandray azy. Ny tsirairay dia tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny rivotra iainan'ny iray hafa, izay mety mahafinaritra na tsia, arakaraka ny firaisany na ny tsy fitoviana amin'ny toetoetran'ny vatana ara-batana izay ahitana ny atmosfera tsirairay. Ny vatana ara-batana ho an'ny tsirairay dia hahasarika na hanosotra ny iray hafa; na mety ho mitovy amin'ny kalitaony izy ireo ka tsy hiantehitra na hisintona fa ho "ao an-trano" ao anatin'ny orinasa tsirairay.
Ny antony hafa kosa dia manosika ny tenany. Izy ireo dia ny rivotry ny saina tsirairay. Ny atmosfera ara-batana amin'ireny dia mety hifanohitra na hifanohitra. Io fifanarahana io na ny fanoherana dia hihamatanjaka na hihena amin'ny fomba izay misy ifandraisany amin'ny atmosfera. Ankoatra ny faniriana izay mavitrika mandritra ny fotoana voafetra amin'ny ati-pihetsika ara-tsaina rehetra, ary ankoatra ny fikasan'ny fitsidihana, dia misy ny natiora fototra sy ny hatsaran'ny kalitaon'ny rivotra iainan'ny tsirairay, izay hisy fiantraikany eo amin'ny natiora sy ny toe-tsain'ny hafa . Ho toy izany koa ny fanoherana ny fanoherana, ny hatezerana, ny fitsiriritana, ny fangidiam-panahy, ny fankahalana, ny fialonana, na ny firehetam-po, ny hafaliana, ny hatsaram-panahy, ny hatsaram-panahy, ny hafaliana na ny hafanam-po. Ireo vokatra ireo dia novokarin'ny asa amin'ny fitsipiky ny faniriana ao amin'ny batterie magnetika, ny vatan'ny astral. Ny vatan'ny astral dia mamorona angovo maitso izay manomboka amin'ny faritra rehetra amin'ny alalan'ny vatany, fa indrindra amin'ny tanana sy ny torso. Io fihetsika ankehitriny io dia toy ny lelafo malefaka na henjana izay mahatonga ny ati-pihetseham-po ho an'ny iray mba hifindra amin'ny onja mangidy na mahery izay miditra sy manafika na mifangaro amin'ny rivotra iainan'ny hafa. Raha manaiky izany amin'ny hafa ny atmosfera dia manaiky, manome sy mamaly ny hery sy ny fiaraha-miasa amin'ny iray hafa; raha manohitra ny toe-piainana ara-pihetseham-po amin'ny hatsaram-panahy sy ny kalitao ny natiora, dia hifanandrina sy hanao fihetsika toy izany koa ny atmosfera rehefa mihaona mivantana ny rivotra mahery vaika roa; Ny tafiotra no vokatra.
Amin'izao fotoana izao na aorian'ny fihaonan'ny atmosfera ara-batana sy ara-tsaina, ny rivotra iainan'ny tsirairay dia manantona ny tenany, ary araka ny hery amam-pahefany sy ny heriny dia iray amin'ireo toe-tsaina amam-panahy ireo no hitarika sy hifehezana ny atmosfera ara-batana sy ara-tsaina ary hisy fiantraikany amin'ny ati ny hafa. Raha mifankatia ny atmosfera ara-batana sy ara-pihetseham-po, ary raha mifanandrify amin'izy ireo ny ati-doko, ny toetra tsara dia manjaka ary mifanaraka tsara ny roa. Saingy ny fahasimbana, ny tsy fahatsapana na ny ady misokatra dia hisy araka ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny toe-batana ara-batana sy ara-tsaina sy ara-tsaina ataon'ny lehilahy roa.
Raha ny saina iray dia tsara fiofanana sy manana ny toetra maha-sosialy azy tsara, dia ho afaka ny hitarika ny saina sy hifehy ny rivotra iainan'ny hafa. Saingy raha tsy misy ny fanindrahindrana ny toetry ny toe-tsainy, dia ny hery matanjaka indrindra amin'ny atmosfera ara-tsaina roa no hitarika sy hifehezana ny atsy sy ny saina.
Raha ny orinasa mijoro sy ny toerana sosialy sy ny toe-javatra amin'ny fihetseham-po ara-batana dia ireo zavatra tena karakaraina, avy eo izy ireo dia hampisy fiantraikany amin'ny hafa. Raha toa izy ka mampihetsi-po sy miombom-pihetseham-po ary mihetsi-po amin'ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po, dia hisy fiantraikany ratsy amin'ny rivotra iainan'ilay vao tonga. Raha heveriny tsara ny zavatra ataony alohan'ny hanaovana azy, raha nomena fanadihadiana sy fikarohana ara-analyse izy, raha manandratra ny olona amin-kery ara-tsaina izy, fa tsy amin'ny alahelo azony entina, na amin'ny toetran'ny toetrany, dia ho mora kokoa amin'ny Miankina amin'ny toe-tsain'ny ankilany. Araka ny maha-samihafa ny hatsaram-panahin'ny olona iray dia hihaona sy hifanaraka amin'ny an'ny iray hafa ary araka ny fahefany dia hisy fiantraikany na tarihin'ny iray hafa izany. Fa raha tsy tokony hifanaraka amin'ny iray hafa ny ati-piainana iray, dia hisy ny fanoherana sy ny fifandirana iray, mandra-pahatongan'ny iray amin'ireo roa ireo dia hifanaraka na hilefitra amin'ny iray hafa, raha tsy hoe ny ati-tsaina roa izay samy hafa Ny hatsaram-panahy dia tokony ho mitovy amin'ny kalitao, na raha matanjaka tsara ny atmosfera ara-tsaina, mba hisorohana ny fifanarahana ary hampitsahatra azy ireo amin'ny fifanoherana sy mifanohitra.
Ny saina tsotra dia tsy afaka miasa mivantana amin'ny atiny ara-tsaina amin'ny toe-tsaina ara-tsaina amin'ny hafa, ka izany dia mihetsika na entanin'ny rivotra amin'ny rivotra amin'ny asa ataony amin'ny toe-tsaina ara-tsaina amin'ny hafa. Ny saina dia miditra ao amin'ny atidoha ary mampiova ny vatana sy ny faniriana. Amin'ny alalan'ny fihetsika amam-panahy amin'ny faniriana sy ny endrika, ny lelan'ny hazavana tsy hita maso dia alefa eo anelanelan'ny volomaso sy ny handriny. Noho izany dia manao zavatra iray, miray saina, miatrika fanamby na fifampiarahabana, ny sainin'ny iray amin'ny alalan'ny toe-tsainy ara-tsaina; ny fomba fisainany dia manao fihetsika toy izany ary mametraka lapa eo amin'ny handriny; Ny teboka roa dia miposaka avy eo ary mandray hafatra amin'ny alalan'ny ati-tsaina tsirairay. Ny teny dia azo ampiasaina hampifandray na hampiara-peo ireo toeram-pivoahana, saingy mifanaraka amin'ny heriny ny atin'ny toe-tsaina tsirairay dia misy fiantraikany amin'ny hafa tsy misy dikany.
Ho an'ny rivotra iainan'ny olona iray dia hisy fiantraikany amin'ny rivotra iainan'ny hafa, ny vatany dia tsy maintsy akaiky. Raha toa ny toe-tsaina misaina amin'ny olona iray dia tokony hisy fiantraikany amin'ny an'ny hafa izany, matetika dia ilaina ny fijerena ny vatana ara-nofo tsirairay na ny fandrenesana ny hafa. Ny vatan'ny vatana dia matetika ilaina satria ny atmosfera miady amin'ny manodidina azy. Ankoatra ny tranga manokana, ny atmosferikan'ny olona dia tsy matanjaka loatra ka manao fihetsika lava lavitra noho ny toe-tsaina misedra ny hafa. Raha misy ifandraisany amin'ny toetran'ny olona iray, dia tsy ilaina ny fiantraikany eo amin'ny toe-tsain'ny hafa. Araka ny eritreriny, ny iray dia mampifandray ny rivotra iainany amin'ny toe-tsain'ny hafa. Amin'ny alalan'ny toe-tsaina ara-tsaina dia mety ho voataona na manolo-kevitra amin'ny olon-kafa.
Ny rivotra ara-panahy ao amin'ilay olona miditra ao amin'ny efitrano dia mety, saingy mahalana dia tsapan'ny saina avy hatrany. Tsy mahagaga raha mifandray tsara amin'ny sainy ny toe-panahy ara-panahin'ny lehilahy iray ary ny toetrany ara-tsaina dia tokony ho tsapan'ny hafa na tsapany. Na izany aza, dia mety ho matanjaka ny rivotra ara-panahy, na dia tsy mifandray amin'ny toe-piainana ara-pihetseham-pony aza, mba hahatonga azy ho voasambotra sy ho tsapan'ny toe-tsaina ara-tsaina sy ara-pihetseham-pon'ny hafa, ary mety ho entina ny atmosfera ara-panahy hafa amin'ny fifandraisany amin'ny atmosfera hafa. Rehefa milaza ny atmosfera ara-panahy dia mihetsika amin'ny iray hafa tsy miankina amin'ny heriny misaina sy ny toetrany mamim-pony, ary miteraka fahanginana sy fitsaharana, ary mandritra izany fotoana izany ny rivotry ny fifandraisana ara-panahy dia mifandraika amin'ny heriny ary mety hifehezany ny atmosfera ara-tsaina sy ara-tsaina.
Izany rehetra izany dia azo atao na miaraka amin'ny fampiasana ny teny, ary na dia tsy voalaza aza ny toetra ara-panahin'ireo lehilahy roa ireo. Amin'izay fotoana izay, ny tanjaka sy ny finoana ary ny tanjona tsy miovaova dia hitoetra ary hisy fiantraikany amin'ny iray izay voatarika taorian'ny nandaozan'ny anankiray. Raha toa ka tokony hiresaka momba ny resaka ara-panahy ny olona ara-panahy dia tokony hiantso sy hampiroborobo ny atmosferin'ny hafa amin'ny alalan'ny foto-pinoana na ny olona ara-panahy ny olona iray izay manana hery ara-panahy ny olona, ​​dia ilay mitovy amin'izany no hitovy amin'izany Ny hetahetam-panahin'ny olona no nampiova azy. Saingy rehefa nesorina izany, ary araka ny tanjaky ny rivotra ara-panahy na ara-tsaina na ara-pihetseham-po ary ny fampifanarahana ny tsirairay amin'izy ireo, dia hanao izany atmosfera izany izy izay matanjaka indrindra. Raha ny fanahiny ara-panahy no manjaka ny atiny hafa, ny hevitra nomena sy ekena dia hanjaka; ny sainy dia hifanaraka ary mety ho tafiditra ao anatin'izany ny rivotry ny toetrany. Fa raha manjaka ny atmosfera hafa ny sainy, na dia ankatoavina aza ny hevitra, dia horaisina amin'ny làlan-tsaina izy ireo ary handrefesana sy handanjalanja. Io fandikana mekanika momba ny hery ara-panahy nomena io dia hisintona ao an-tsainy ny fahazavan'ny rivotra ara-panahy. Fa raha tsy matanjaka tsara ny sainy ary tsy afaka manakana ny ara-panahiny amin'ny toe-piainana ara-pihetseham-pony amin'ny hevitra sy ny lojika, dia hisavorovoro ao anatin'ny fihomehezana ara-pinoana ny rivotra iainany; Ny fihetseham-po dia hifehy ny sainy. Ny fahazavana ara-panahy nomena azy dia horaisina amin'ny heviny ary hisarika ny hafa izy ary hiantehitra amin'ny fihetseham-pon'ny ara-pinoana sy ny fihetseham-po ara-pihetseham-po.
Noho ny fahasamihafana eo amin'ny atmôsferin'ny lehilahy iray dia sarotra ho an'ny lehilahy roa sy ny atmosfera tsirairay ny mifangaro, mifanaraka, na mifanaraka amin'ny tsirairay, raha tsy hoe ny atmosfera iray amin'ny lehilahy iray dia mitovy tanteraka amin'ny ny an'ny hafa, ary raha tsy ampifanarahana amin'ny toetr'andro mifanaraka aminy ny kalitao sy ny herin'ny atmosfera tsirairay. Noho izany dia matetika ny lehilahy sy ny atmosfera no marimaritra iraisana.
Rehefa tafiditra ao anatin'ny efitrano iray ny roa ary misy ny marimaritra iraisana dia misy fifandraisana eo amin'ny atmosfera. Ny fidirana amin'ny olona fahatelo dia tsy maintsy hanova tanteraka ny fifandraisana. Ny zava-baovao dia handrava ny lozam-pifamoivoizana ary handraraka ny atmosfera amin'ireo roa ireo, na hampiditra singa iray izay hampifandanjana sy hampifandanja ary hampifanaraka ny fifanarahana eo amin'ny lehilahy sy ny atmosfera. Taorian'ny fotoana dia nisy fifandraisana vaovao natao teo amin'ireo lehilahy telo sy ny atmosfera. Ny fidirana ao aorian'ny fahaefatra sy ny fahadimy dia hamokatra fiovana sy fahasamihafana ary fifandimbiasana vaovao eo amin'ny atmosfera rehefa misy fampidirana vaovao vaovao. Toy izany koa, ny fananganana ny atmosfera izay nataon'olon-dehilahy iray dia hovaina ary ny iray hafa dia natao tsirairay avy handao ny efitrano. Ny toetoetran'ity atmosfera ankapobeny ity dia manapa-kevitra amin'ny hatsaràna sy ny herin'ny atmosfera tsirairay avy.
Amin'ny fanatrehan'ny lehilahy iray na maro dia misy efitra sy trano iray nomena azy ny atmosfera izay maneho ny eritreritra sy ny fanirian'ireo izay miaina na efa niaina na nihanihany. Io habakabaka io dia mamakivaky ny efitrano na trano mandritra ny fotoana fialan-tsasatry ny mpiasany, satria mamaritra ny tanjaky ny eritreriny sy ny faniriany; Mety ho tsapan'ny olona iray izay miditra ao amin'ny efitrano na trano izany.
Ny toerana rehetra misy olona miangona dia manana ny atiny manokana, ny toetra na ny toetrany dia voafaritra amin'ny eritreritra, ny faniriana ary ny asan'ny vahoaka. Ny teatra, ny fivarotana zava-pisotro, ny hopitaly, ny fonja, ny fiangonana, ny efitrano fitsarana ary ny andrim-panjakana na tsy miankina, dia samy manana ny toetrany manokana, izay mety ho tsapan'ny tsirairay. Ny olona tsy azo antoka sy matanjaka indrindra dia tsy milefitra amin'ny vokatry ny atmosfera, fa hahatsapa na hahatsikaritra kokoa ireo izay mahatsapa sy mahatsiaro tena ny sainy.
Ny tanàna iray, tanàna iray, tanàn-dehibe, dia manana ny toetrany manokana. Ny olona mahatsapa na mahatsikaritra ny toetrany dia mihataka lavitra na mankany amin'izany toerana izany, satria ny atmosfera amin'io toerana io dia mitondra vokatra amin'ny atmosfera. Ny olona iray dia hahavariana ny fahasamihafana misy eo amin'ny toerana misy ady, baolina baolina, kianja fanaovana hazakazaka, toeram-pivoriana iray, na fasana iray. Ny fahatsapany dia avy amin'ny fahatsapana ny atmosfera samihafa amin'ny tenany ihany.
Ireo toerana izay atrehin'ny olona dia tsy toerana tokana izay manana toetry ny atmosfera. Ny toerana misy ny tongotry ny olona dia tsy misy afa-tsy ny rivotra iainan'ny tsirairay. Ilay iray izay nandeha namakivaky ala lehibe, tany amin'ny tany lemaka midadasika, nandalo tany lavidrano marefo, nipoitra ny tendrombohitra, na nidina tany anaty harena an-kibon'ny tany, niditra tao anaty lava-bato, na nikaroka tany amin'ny faritra avon'ny tany, dia hahalala fa dia manodidina azy io ny fiantraikany amin'ny toetr'andro izay tsy azo ovaina. Io fitarihana io dia mifandray amin'ny rivotry ny olona avy amin'ny rivotry ny toerana.
Ny firenena tsirairay na ny firenena tsirairay dia manana ny atiny manokana, izay tsy mitovy amin'ny an'ny firenena sy firenena hafa. Alemà, Frantsay, Anglisy, Hindoo, Chinaman, Arabo, dia tsy mitovy amin'ny iray. Rehefa mandeha any amin'ny firenena hafa ny lehilahy iray avy any amin'ny firenena iray, dia mitondra azy atsy ho atsy amin'ny firenena nahaterahany sy nentiny. Ny toetrany dia ho tsapan'ny vahoaka ao amin'ny firenena ho samy hafa amin'ny azy manokana. Ny fahasamihafan'ny fahasamihafàna dia noho ny tontolo iainan'ny fireneny, izay manasongadina azy fa ny maha-izy azy dia misy fiantraikany amin'ny atmosfera.
Ny fanahin'ny firenena iray dia maneho ny tenany amin'ny alalan'ny atmosfera. Ity toe-tsaina na ateraky ny firenena ity dia manaitra ny zaza ao am-bohoka, ary rehefa teraka dia manintona sy miasa ao anatin'ilay zaza sy ny tanora ny rivotry ny fireneny ary aseho ao aminy ny fahazarana sy ny fombafomba ary ny fitsaratsaram-poana, araka ny toerany eo amin'ny fiainana sy ny fomba fiompiana. Ny zaza dia mitaky ary efa natsangana ho an'ny ati-tenany manokana ny tontolo iainana. Ity sary sokitra na grafting na fananganana ny firenena ao anatin'ny atin'olombelona tsirairay dia maneho azy ho toy ny "fitiavan-tanindrazana", ary mety ho hita koa ao amin'ny antsoina hoe fomba amam-panao sy ny fironana izay mety na dia, ary matetika aza, dia misy fiantraikany amin'ny fomba fisainany.
Ny rivotry ny firenena dia misy fiantraikany amin'ireo teraka ao aminy sy ireo izay miaina ao aminy. Araka ny hery sy ny herin'ny toe-panahiny ara-panahy sy ara-tsaina ary ara-batana sy ara-batana dia hisy fiantraikany amin'ny atmosfera ao amin'ny firenena izay iainany. Izy dia hisintona na hanodidinin'ny atmosfera ao amin'ny firenena, araka ny fifandraisana misy eo amin'ny ati-tenany sy ny toetra na ny antony manosika azy ireo.
Matetika ny saina no tafiditra ao amin'ny firenena iray izay tena ankasitrahan'ny rivotra iainana. Saingy matetika dia ny fisainan'ny saina iray no mahatonga ny ati-pirenena ho samy hafa amin'ny azy manokana. Izany dia noho ny antony karmika, izay mety ho sarotra. Saingy ny olona izay tonga tahaka izao dia mety handao ny fireneny ary hisafidy iray hafa izay hifanaraka kokoa amin'ny rivotry ny rivodoza.
Ny iray dia mety hianatra betsaka amin'ny toetran'ny tsirairay amin'ny atmosfera, amin'ny alalan'ny fijerena ny fomba amam-panao sy ny ampahany amin'ny famolavolany ny sasany amin'ireo olona izay mihaona aminy, ary ny fiantraikany amin'ny zavatra ataony sy ny teniny ary ny fisiany. Tsy tokony hanao izany amin'ny fahalianan-kialofana tsy misy dikany na amin'ny fitiavan'ny fanandramana izy, fa mba hahafahany mianatra ny fomba fampiasana tsara indrindra eto an-tany amin'ny asany eto amin'izao tontolo izao. Tsy tokony hametraka ny hafa ho "fitsapana" izy, ary tsy hanandrana hahita izay azon'izy ireo afenina. Raha manandrana manisy fiantraikany amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny toe-tsainy sy ny toetrany izy dia tsy handroso lavitra ny fandalinany, fa ny rahona ary hampangorohoro ny rivotra iainany ara-tsaina ary ny zavatra mety ho nanandrana azy ireo dia hihetsika sy hampihetsi-po azy ary hihatra aminy ny rivotra iainany.
Ny iray izay mora voataona ary tsy afaka mifehy azy ireo dia tokony hiala amin'ny vahoaka marobe izay hitombo ny fientanam-po ary tokony hisoroka ireo mpihetraketraka, satria ny rivotry ny fihetsiketsehana dia manjavozavo noho ny fitiavana sy ny faniriana, izay hampitraka ireo hery ireo amin'ny toe-tsainy manokana dia mety hitarika azy hanao zavatra izay hanenenany amin'ny fotoan-tsarotra, na ny rivotry ny habibiana dia mety hahatonga azy ho naratra satria tsy mamela azy hanao zavatra mifanaraka amin'ny fitarihana ataon'ilay vahoaka.
Ny tanjon'ny fandinihina ny atmosfera dia tokony ho an'ny olona iray hiditra amin'ny fahalalana ho an'ny tenany manokana, ary mety hitondra ny rivotry ny rivotra ho amin'ny fifandraisany amin'ny tsirairay izy; mba hahafantarany ny fahasamihafana misy eo amin'ny ambany sy ny ambony; Mba hanatsarany ny latsa ataony amin'ny avo indrindra; ary ny tsirairay dia hatao tanteraka ao amin'ny tontolony.
Ny olombelona dia tokony hanana fihenam-bidy hatrany sy hampivoatra hatrany ary ny tsirairay amin'ny atmosfera dia tsy maintsy mihetsika ary miara-miasa avokoa ny rehetra. Ny saina tonga nofo dia tokony hahatsiaro ny atmosfera tsirairay ary hiasa sy hamakivaky azy amin'ny fomba mahomby. Mba hanaovana izany dia ilaina ny asa. Ny rivotra iainana ara-batana dia misy fiantraikany amin'ny hetsika ara-batana, ny atmosfera ara-tsaina amin'ny faniriana, ny toe-tsaina ara-tsaina amin'ny eritreritra, ary ny tontolo ara-panahy amin'ny finoana ny zavatra fantany.
Ho an'ny atmosfera izay tokony hifaneraserana amin'ny tsirairay, dia tokony hisy fihetsika miara-miasa na miara-miasa tsirairay. Tokony hisy fihetsika toy izany izay hampitraka ny atmosfera tsirairay ary koa hiantso ny fahalalana na fahazavana amin'ny rehetra. Ny lahateny ara-batana na ny teny holazaina dia handray andraikitra amin'ny rivotra ara-batana, ny faniriana dia hanao zavatra amin'ny alalan'ireo teny ary hampihetsika ny rivotra iainana, ny eritreritra dia hanome ny fitarihana ny faniriana ary hiantso ho amin'ny hetsika ny toe-tsaina ara-tsaina, ary ny finoana ny fahalalana ny zava-drehetra dia mifandray ny ara-panahy amin'ny atmosfera hafa.
Ny fiantsoana sy ny fiantsoana ny tena ambony indrindra dia azo avy amin'ny teny nambarany, amin'ny faniriana mafy ny hahafantatra izany, amin'ny fisainana ny dikany sy amin'ny finoana lalina eo anatrehan'ny fisiana ara-panahy izay angatahina.
Toy ny kofehy mamakivaky ny atmosfera tsirairay sy mifandray amin'ny olona ara-batana, dia misy ny mifandray amin'ny tsirairay ary amin'ny alalan'ilay hoe ny saina ao amin'ny vatany dia mety hahalala ny tsirairay sy ny atiny rehetra ary hanitsy ny tenany fifandraisana mety amin'ny tsirairay. Tsy zavatra azo antoka izany; Fahamarinana izany. Ny saina ao amin'ny vatana dia eo amin'ny tendrony iray amin'ny kofehy; Ny olon-droa miaina "izaho" dia amin'ny farany. Ho an'ny saina tonga nofo dia toa tsy misy fiafarana hafa afa-tsy izay misy azy; na raha mieritreritra fa misy fiafarana ara-panahy dia tsy mieritreritra ny fomba hanatanterahana izany. Ny fiafarana izay eo amin'ny ara-batana dia mety hahatratra ny tanjona ara-panahy. Ny fomba hanatrarana izany sy ny fampiraisana ny tanjona dia amin'ny alalan'ny eritreritra. Tsy ny fomba fisainana, fa ny mieritreritra na manomana ny lalana. Ny làlana dia ilay kofehy. Ny eritreritra dia mandeha amin'iny kofehy iny ary mahita azy ary manentana izany. Ny kofehy mihitsy no mahatsiaro amin'ny atmosfera rehetra. Ny fiheverana azy io dia fiandohana; Ny fahatsiarovan-tena dia ny fisokafan'ny lalana. Amin'ny fiezahana hieritreritra izany sy amin'ny fanitarana ny fitsipiky ny saina, ny saina tonga nofo dia mahatsiaro ny tenany ary mahatsapa ny maha izy azy ambony kokoa amin'ny faran'ny fitsipiky ny saina, ary mandritra ny ezaka mitohy dia ho iray ny farany.